Kalaw‘s Dreamy Cafe - LODGGY
တောင်ပေါ်မြို့လေး , တောင်စောင်းတလျှောက်ချစ်စရာခေါင်မိုးချွန်အိမ်လေးတွေနဲ့ အခုချိန်လောက်ဆို ခရီးသွားတွေကို စိန်ပန်းပြာတွေက ပင်လုံးကျွတ်တမြို့လုံးပွင့်ပြီး ကြိုဆိုနေလောက်ပါပြီ… ကလောရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး ကော်ဖီသောက်လို့ရမယ့် ကော်ဖီဆိုင် list လေး..
Hillock Villa /Cafe
ကလောရဲ့ signature ခေါင်မိုးချွန် သစ်အိမ်လေးတွေနဲ့ ထင်းရှူးပင်လေးတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်/ ဟိုတယ်လေးပါ… ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်းထဲ ခုံတန်းလးပေါ်မှာထိုင်ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ ကော်ဖီသောက်ရသလို ခံစားရမှာပါ. ရာသီပေါ်သီးနှံဖျော်ရည်စုံအပြင် ရှမ်းစာတွေလည်းရရှိပါတယ်။
Address: 10 Quarter, Damasatkyar Street, Kalaw 01000
တောင်ကြားလမ်းဘေး မှာရှိပြီး နှစ်ထပ်သစ်သားအိမ်ပုံစံလေးနဲ့ ရှုခင်းကောင်းတဲ့ နေရာလေးပေါ့.ဒေသထွက် ကော်ဖီစေ့စစ်စစ်ကိုဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကျိတ်ပြီးဖျော်ပေးတဲ့Americano,cappuccino,latte တွေအပြင် wafer, toast တို့လည်း ရပါတယ်။
Address: Hnee Pagoda Rd, Kalaw
New Simple Life (Coffee & Sandwich Bar)
ဒီ အိမ်ဆိုင်လေးက နေရာလေးကလည်း dreamy (အိမ်မက်ဆန်ဆန်)… အစားသောက်ကတော့ Italians စာ အဓိကဖြစ်ပြီး cake / pizza/ sandwiches လေးတွေကလည်း ဒေသထွက် သီးနှံတွေအသုံးပြုပြီး ချက်ပြုတ်တယ်လို့သိရတယ်..သူရဲ့ honey ginger juice ကလည်း must try ပါနော်။
Address: Shwe Oo Min Road, Near Pine Hill Resort . Kalaw Shan State. Kalaw
Kalaw Tea House (bakery & cakes)
ဒီ Tea House လေးက cakes & coffee အပြင် သူရဲ့ menuထဲမှာ western foods/local foods တွေလည်းရပါတယ်..သူရဲ့ ငှက်ပျောသီးကိတ် ကလည်း ကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
Address: 5/18 Aung Char Thar Street, Kalaw
Kalaw Cafe Yard
တောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာဖြစ်ပြီး ဆိုင်ရဲ့အပေါ်ထပ်က ကြည့်ရင် အရမ်းလှတဲ့ ရှုခင်းကိုမြင်ရမှာပါ.. romantic ဆန်ဆန် coffee date ထွက်ချင်သူများအတွက် ကွက်တိပါပဲ.. ဓာတ်ပုံလှလှ ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေလည်း ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ဖွင့်ထားတာလည်း မကြာသေးတဲ့ cafe ဆိုင်လေးပါ။
Address: No.157, Yay Htwat Oo Street, Block.9, Kalaw, Southern Shan State, Myanmar.
Monaco Cafe & Restaurant
ဒီဆိုင်လေးကတော့ သစ်/ဝါး/နှီးတို့ နဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ cafe shop လေးပါ။ သူဆီမှာ coffee အမျိုးစားစုံအပြင် ice-cream cake roll တွေလည်းရပါတယ်။ Western foods တွေလည်းရပြီး လူမျိုးဘာသာမရွေးစားနိုင်တဲ့ halal restaurant လဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ restaurant လေးကတော့ kalaw ရဲ့ နေရာသစ်လေးဖြစ်ပြီး သူရဲ့ design concept လေးက green house (ဖန်လုံအိမ်) ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဘက် ခြံကျယ်ထဲမှာလည်း အနားယူ စားသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်မှာ ကိုယ်တိုင်ထုတ် သဘာဝဆပ်ပြာ/ အလှဆီ စတာတွေကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံလှလှ တွေရိုက်လို့ရပြီး ဝင်ကြေး၁၈၀၀ တော့ပေးရမှာပါ။
Address: No 45 (a), East Circular Road, East Bogone, Kalaw
ဒီဆိုင်လေးကတော့ ကလောပုံစံ သစ်/နှီးတို့နဲ့ ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပြီး ထူးခြားချက်ကတော့ သူရဲ့ avocado specialize menu ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးပါဝင်တဲ့ coffee/milkshake/smoothie တွေအပြင် avocado toast / ထောပတ်သီးနဲ့ ချကိပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းလျာတွေပါရရှိပါတယ်။ ထောပတ်သီးချစ်သူတွေ မလွတ်တမ်း သွားရမယ့်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Address: 12/1, 12/5 University Rd, Kalaw
ဒီဆိုင်ရဲ့ အဓိက highlight က vegetarian friendly ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ homemade ကွတ်ကီးတွေ၊ ရေခံမုန့် ( ice-cream) ကလည်း must try ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသစာတွေချက်ပြုတ်ချင်သူတွေအတွက် ဟင်းချက်သင်တန်း(cooking class) လည်းရှိပါတယ်။
Address: 33 Station St, Kalaw
ကဲ Kalaw သွားတဲ့အခါ သွားမယ့်နေရာလေးတွေရပြီ ဟုတ်။ ယူတို့ရော ဘယ် Cafe တွေ ရောက်ဘူးလဲ? သွားဖို့ စဥ်းစားနေတဲ့သူ‌တွေအတွက်လဲ Lodggy Page မှာ ကလောဟိုတယ်လေးတွေတင်ထားတယ်နော်..